के नवराज सिलवाल नेपालमै फरार छन् ? छन् भने कहाँ छन् ? सिलवालको मुद्दा निल्नु न ओकल्नु । (भिडियो सहित) - Enepalese.com
के नवराज सिलवाल नेपालमै फरार छन् ? छन् भने कहाँ छन् ? सिलवालको मुद्दा निल्नु न ओकल्नु । (भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७४ पुष ३० गते १३:०१ मा प्रकाशित
गत हप्ता मलेसिया गए भनिएका पूर्व डिआईजी एवम् ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद नजराज सिलवाल नेपालमै रहेको पत्ता लागेको छ । उनी बिरुद्ध देउवा सरकारले पक्राउ पुर्जि जारी गर्दा उनी एक कार्यक्रमको लागी मलेसिया पुगेको समाचारहरु आएका थिए । पछिल्लो समय उनि मलेसिया नगएको तर नेपालमै लुकेर बसेको प्रहरी स्रोतको दाबि छ ।
देउवा सरकारले आफ्नै पालामा उनलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने लक्ष्य रहे पनि उनी भने देउवा सरकार रहुन्जेल बाहिर ननिस्कने सोच बनाएका छन् । सरकारले पक्राउ पुर्जि जारि गरेपछि डा. गोबिन्द केसीलाई छिटै समाएको थियो तर नवराज सिलवालको भने खाजि गरिरहेको छ । उनी कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा प्रहरी स्रोत समेत अनबिज्ञ छ ।